मोटरसाइकल चलाउदै हुनुन्छ ? होस गरौ यस्तो गरेमा कारवाही हेर्नुहोस् – पुरा पढ्नुहोस्……
काठमाडौं, १ मंसिर । अब मोटरसाइकलको लुकिङ ग्लास परिवर्तन गरेमा वा तोडमोड गरेमा कारवाही हुने भएको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मोटरसाइकलको लुकिङ ग्लास तोडमोड गर्ने या परिवर्तन गरेर राख्ने चालकलाई कारवाही थालेको हो ।
लुकिङ ग्लासको जथाभावी प्रयोग गर्ने, हटाउने तथा स्वरूप परिवर्तन गरेका कारण चालकले पछाडिको सवारी नदेख्दा दुर्घटना बढेको भन्दै महाशाखाले उक्त अभियान थालेको आज एक सूचना जारी गरी जनाएको छ ।
लुकिङ ग्लास फोल्ड गर्ने, नराख्ने तथा नदेखिने गरी राख्ने चालकमाथि शुरु भएको अभियानअन्तरगत शनिबार पहिलो दिन ३ सय ४५ चालकलाई कारवाही गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालका अनुसार उनीहरूलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार कारवाही हुनेछ ।
महाशाखाले अन्य मापसे जाँच तथा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनविरुद्ध कारवाही अभियान पनि जारी राखेको जनाएको छ । रासस
यी ८ घ’टनाहरू: ज’सले गोर्खाली सेना कसैसँग पनि झु’क्दैनन भन्ने प्र’माणित गर्छ ! विश्वमा नाम राखेको छ। बिबरण सहित हेर्नुहोस…
काठमाडौ । बेलायतमा गोर्खाली सेनाले से’वा गर्न था’लेको २ सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा गोर्खा सैनिकको ब’हादुरीको व’र्णनले बेलायती अखबारहरु भरिए । ती मध्ये केहीले गोर्खा सैनिक कति भ’यानक हुन्छन् भन्ने बु’झ्न केही घ’टनाहरु उ’ल्लेख गरेका छन् ।
घ’टनामध्ये पनि ८ घ’टना यस्ता पनि छन् जसले गोर्खा सैनिकको ब’हादुरीका अ’गाडि जो कोही झु’क्न बा’ध्य हुन्छ ।सन १८१५ मा बेलायती सेनाले नेपालमाथि धा’वा बोल्यो । तर बेलायतीहरु गोर्खालीबाट सजिलै प’राजित भए ।
त्यसपछि बेलायती सेनाका अ’धिकारीहरुले सो’चे कि यदि गोर्खालीलो प’राजित गर्न स’किदैन भने उनीहरुलाई आ’फ्नो सेनामा सा’मेल गर्न अ’वश्य सकिन्छ ।
त्यसपछि नेपाल र बेलायतबीच भएको शा’न्ति स’म्झौतामा नेपाल गोर्खालीलाई बेलायती शा’ही सेनामा भ’र्ति हुने स्वी’कृति दियो । त्यसपछि पहिलो र दोस्रोसहित गोर्खाली सेनाले कै’यन यु’द्ध ल’डे । त्यस मध्येको फ’कल्याण्ड यु’द्ध त बेलायतीहरुले जी’वनभर न’बिर्सने यु’द्ध गोर्खालीले ल’डिदिए ।
अहिले गोर्खाली सेना यो ग्र’हकै स’बैभन्दा भ’यानक हुन्छन् भन्ने प्र’माणित भएको छ ।सन २०१० मा अ’फगानिस्तानमा गोर्खाली सै’निक दिपप्रसाद पुन ए’क्लैले ३० ता’लिबानी ल’डाकुको एक चि’हान बनाए । उनी चे’कपोइन्टको छ’तमा बसेर ड्यु’टी गरिरहेका थिए ।
ठीक त्यहीबेला ता’लिबानीले ए’के फो’र्टी से’भेन, ग्रि’नेड जस्ता घा’तक ह’तियारसहित चारैतिरबाट धा’वा बो’ले । दिपप्रसादलाई मा’र्न ता’लिबानीहरु छ’तमा च’ढ्न खोजे ।
तर उनले आफूसँग भएको १७ ग्रि’नेड, ४ सय रा’उन्ड गो’लीले ३० जना ता’लिबानी लाई एक एक गरी भूँ’ईमा ब’जारी दिए । पुनको ब’हादुरीलाई बेलायतमा उ’च्च ब’हादुरीका लागि दिइने भि’क्टोरिया क्र’सबाट स’म्मान गरियो ।
सन् २००८ मा गोर्खा सैनिकको एक टो’ली अ’फगानिस्तानमा ए’म्बुसमा पर्यो । घ’टनामा युवराज राई न’राम्ररी घा’इते भए ।क्या’प्टेन गजेन्द्र आङदाम्बे, रा’इफलम्यान धन गुरुङ र मञ्जु गुरुङले युवराजलाई ३२५ फि’ट मा’थि खु’ला स्था’नमा बो’केर पु’र्याए ।
टो’लीका एक गोर्खाली भने घा’इते युवराजको र आफ्नो रा’इफल बो’केर स’त्रुसँग ल’ड्न फ’र्किए ।सन १९४५ मा रा’इफल म्या’न लक्ष्मण गुरुङ आफ्ना दुई साथीहरुसँग आफ्नो मो’र्चामा थिए । त्यहीबेला २०० जापानी सेनाले फा’यर खोलिदियो ।
गुरुङका दुवै साथीहरु न’राम्रोसँग घा’इते भए । जापानी सेनाले गुरुङको सा’नो स’मूहमा ग्रि’नेड फ्या’क्न थाल्यो । गुरुङले सु’रुका दुईवटा ग्रि’नेड जापानी सेनाकै स’मूहमा फ’र्काइदिए । तर जब तेस्रो ग्रि’नेड फ’काउन खो’जे त्यो गुरुङको दा’हिने हातमा वि’ष्फोट भयो ।वि’ष्फोटमा गुरुङका औ’लाहरु, दाहिने पा’खुरा र अनुहारमा ग’हिरो चो’ट लाग्यो ।
त्यसपछि जापानी सेना गुरुङकै शि’विरमा अ’घि बढ्यो । तर गुरुङले देब्रे हातले रा’इफल च’लाएर ३१ जापानीलाई मृ’त्युको घा’टमा पु’र्याइदिए । त्यसपछि बाँ’की जापानीले अघि ब’ढ्ने हि’म्मत गरेनन् । सो यु’द्धमा गुरुङको वि’जयी भयो । उनले पछि भि’क्टोरिया क्र’स प्रा’प्त गरे ।भानुभक्त गुरुङ एक त्यस्ता यो’द्धा थिए जसले दोस्रो वि’श्वयुद्धमा ए’क्लैले ब’र्मामा जापानी सेनालाई हा’यलकायल पारेका थिए ।
जापानी सेनाको स’बैजसो बं’कर एक्लैले क’ब्जा गर्ने भानुभक्तलाई पनि भि’क्टोरिया क्र’सबाट स’म्मान गरिएको थियो । भानुभक्तको प्ला’टुनमा जब १० जनामात्रै थिए, त्यहीबेला जापानी से’नासँग घ’मासान यु’द्ध भयो ।
भानुभक्तको प्ला’टुनलाई जापानीहरुले रा’इफल, ग्रि’नेड, मो’र्टारले प्र’हार हुन थाल्यो । केही लु’केर प्र’हार गर्नेहरुले पनि गरे । भानुभक्तले पनि एक रुखमा लु’केर जापानी सेनाको बं’करमा गो’लाबारुद व’र्षाउन थाले । आफ्ना अन्य साथीहरुकै अ’गाडि उनी बं’करमा अ’गाडि ब’ढे । दुईवटा ग्रि’नेड प्र’हार गरेर जापानीको हौ’सलामा क्ष’तविक्षत पा’रिदिए । आफ्नो खु’कुरीले दुई जापानी स’त्रुको ग’र्दन छि’नाए । अर्को एकलाई ढुं’गाले हि’काएर स’माप्त पा’रिदिए । फेरि आ’क्रमणमा उ’त्रेका तीन जापानीलाई उनले गो’लीको नि’साना बनाए ।
बेलायती सेनामा गजे घलेको ठूलो ख्या’ती छ । सन १९४३ मा ब’र्माकै ल’डाइमा जापानी र ब’मेली सेनाको अ’खडा क’ब्जा गर्न दुई प’टक गोर्खा सै’निक अ’सफल भइसकेको थियो । तेस्रो प’टकका लागि घलेलाई जि’म्मेवारी दिइयो ।
तर घले आ’फै घा’इते थिए ।उनको पाखुरा र खु’ट्टामा चो’ट थियो । तर पनि उनले आ’फ्ना दु’श्मनहरुलाई एक एक गरी सि’ध्याए । त्यो बहादुरी स्व’रुप बेलायतले गजे घलेलाई भि’क्टोरिया क्रसले स’म्मान गर्यो ।गोर्खालीको बहादुरी देखेर बेलायतका एक क’र्णेल नै एक पटक का’यल भएका थिए ।
सन १९४३ मा जर्मन सेनावि’रुद्ध ट्यु’निसियामा यु’द्ध छे’डियो त्यसबेला गोर्खाली सेनाको ने’तृत्व क’र्णेल जो’न पि’टरले गरेका थिए । यु’द्ध च’र्किदै गयो । दो’होरो हा’नाहानमा गोर्खाली सेना खु’कुरी लिएर मे’सिनगन च’लाइरहेका ज’र्मन सेनामाथि जा’इलागे ।यु’द्धमा क’र्णेल जो’न पनि घा’इते भए । तर यु’द्ध न’जिति उपचार ग’र्दीन भनेर अ’डान लिए । अ’न्ततः यु’द्ध जि’ते ।
क’र्णेल जो’नले पनि ठूलो स’म्मान पाए ।सन २०११ मा ३५ वर्षका रि’टायर्ट गोर्खा सै’निक बिष्णु श्रेष्ठ भारतमा रे’ल या’त्रा गरिरहेका थिए ।डा’काहरुले रे’ल बा’टो मै क’ब्जा गरे ।
त्यसपछि डा’काहरुले यात्रुका सबै रुपैयाँ, गहना लु’ट्न था’ले । विष्णु नि’हत्था थिए तर उनको साथमा एउटा खु’कुरी चाहिँ थियो । विष्णुले आफ्नो खु’कुरी झि’केर डा’काहरुमाथि ए’क्लै जा’इलागे । उनले तीन भारतीय डा’कालाई मु’ला का’टे झै का’टेर सि’ध्याइदिए ।
आठ जनालाई उ’ठ्नै न’सक्ने गरी मु’र्छीत पारे । ज’बकी डा’काहरुसँग खु’डा, त’रबार र पे’स्तोलसमेत थियो । तीन जनालाई का’टे पछि बाँकी डा’का भागे । त्यो घ’टनामा रे’लका महिलाहरुलाई ब’लात्कारबाट समेत विष्णुले जो’गाए। त्यस बे’ला विष्णुको बहादुरीको प्र’शंसा भारतीय मि’डियामा धे’रै भएको थियो ।
इ’न्डोनेसियाको बो’र्नेओमा सन १९६५ मा त’नाव ब’ढिरहँदा क्या’टेन रामबहादुर लिम्बुले तीन पटक सत्रु’को कि’ल्लामा आ’क्रमण गरे । पहिलो आ’क्रमणमा धेरै गो’लाबारी भयो । सो क्र’ममा दुई गो’र्खाली सैनिकलाई गो’ली लाग्यो । एकको मृ’त्यु नै भयो । धेरै घा’इते भए ।
स’त्रुपक्षले फा’इदा लिनु अघि नै लिम्बुले ग्रि’नेड प्र’हार गरे । उनी ए’क्लैले ग्रि’नेड प्र’हार गर्दै स’त्रुहरुलाई यु’द्धमैदानबाट १०० या’र्ड पर ध’कलिदिए । त्यसपछि लिम्बुले आ’फना घा’इते साथीहरुलाई गो’लाबारीबीच बो’केर १०० या’र्ड व’र सु’रक्षित स्था’नमा ल्याए । उनको त्यो सा’हसलाई बेलायतले भि’क्टोरिया क्र’स दियो ।
Prevचर्चित संगीतकार टंक बुढा’थोकीका दा’ई टिकाराम बुढाथोकीले गरे यी युबतीसँग इन्गेजमेन्ट ! हेर्नुहोस..
Nextरवि लामिछानेले खाेजीदिए ४० वर्ष ह’राएकाे परिवार, रुदै भने-“आई लभ यु रवि”…-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
नेपालमा कोʼरोना त्राʼस …अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न सर्वोʼच्चको आदेश …
खुशीको खबर: नेपालीको रोजगारीका लागि युरोपका १९ वटा देश सिफारिस।
आज फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलामा हेर्नुहोस्..
नेपालमा पहिलोपटक मान्छेमा भेटियो बर्ड फ्लु , बर्ड फ्लुका कारण मानिसको मृत्यु…